စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၇ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၃ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၇ ) ( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၃ )
Posted by Foreign Resident on Aug 1, 2012 in Think Different | 69 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၇ )
( ဆွေးနွေး မိတာလေးပါ – ၃ )
သတင်းထူးလေး ပေးပါတယ် ။
အဘ ဘာ သဘောထား ၊
မှတ်ချက် မှ မပေးပါဘူး ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်က ၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် က ၊
၂၅ ရက်နေ့ ဇူလိုင်လ က လွှတ်တော်မှာ ပြောသွားတဲ့ ၊
မိန့်ခွန်း VDO ခွေ ထွက်လာပါပြီ ။
သူ့ မိန့်ခွန်း ထဲက ထင်ရှားတဲ့ စကား အချို့က ။
” လွှတ်တော်ထဲမှာ လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ၊
အသုံးပြုသွားတာ ဝမ်းနည်းစွာတွေ့ရပါတယ် “
” စစ်တွေ နှင့် စစ်တကောင်းဟာ အိမ်ဦး နှင့် ကြမ်းပြင် “
” ရခိုင် ဘုရင်ဟာ စစ်တကောင်း မှာ နှစ် ၂၀၀ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် “
” ရခိုင် ဘုရင် စစ်ရှုံးတော့ ကုလားဘုရင် ဆီမှာ ခိုလှုံခဲ့တယ် “
” ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အပါအဝင် ရခိုင်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ၊
လူတွေရဲ့ ရုပ်ရည် အသွင်အပြင် စကားတွေက ၊
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စစ်တကောင်း (က လူတွေ ) နဲ့ ဆင်တူတာသည် ၊
ဒီလူမျိုးတွေက ရခိုင်ရဲ့ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ၊
ဒါ အကြီးမားဆုံး သက်သေပါပဲ ”
” ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဟာ ၊
စစ်ဆင်ရေး အမျိုးမျိုး နှင့် အကြိမ်ကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့အတွက် ၊
ထပ်စစ်ဆေးစရာ မလိုလောက်အောင် သေချာနေပါပြီ “
” အဲဒီလို စီစစ်ပြီးတာကို အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ၊
နိုင်ငံသားကဒ် ထုတ်မပေးသေးတာ ၊
ဒီလူတွေကို နိုင်ငံသား မဟုတ်ပါဘူးလို့သတ်မှတ်တာ ၊
ယုတ္တိ မတန်ပါဘူး “
” နိုင်ငံသား ကဒ်ရပြီးသူမှ နိုင်ငံသားဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ ။
နိုင်ငံသား ဖြစ်သူကို နိုင်ငံသား ကဒ် ထုတ်ပေးရတာပါ “
” ရခိုင် ၊ ဒိုင်းနက် ၊ ချက်နား လူမျိုးစုတွေဟာ ၊
ရခိုင် ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ် ၊ အိန္ဒိယ သုံးနိုင်ငံစလုံးမှာ နေနေကြတာပါ ။
ဟိုဘက်မှာနေနေတဲ့ လူမျိုးတွေကို ၊
သူတို့အစိုးရတွေက တိုင်းရင်းသားပေးပြီး ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး ၊
ကျနော်တို့ ( မြန်မာ နိုင်ငံ ) ဖက်မှာမှ ပြဿနာရှိနေတာဟာ သဘာဝ မကျပါဘူး ။
အမှန်ကတော့ လက်မခံလိုခြင်း ၊ ခွဲခြားလိုခြင်း ၊ အမွေ မပေးလိုခြင်း ၊
ကို အခြေခံပြီး ပြောနေတာပါ “
” အနောက်ပြင် ကျေးရွာ ကိစ္စ မှာလည်း ၊
အနောက်ပြင် ကျေးရွာသား ဘင်္ဂါလီတွေက ၊
အတိုက်ခံရမယ် ကြားလို့ သက်ဆိုင်ရာကို အကူအညီတောင်းပါတယ် ၊
ရခိုင်တွေ က ကုလားရွာကို စတင် ကျူးကျော်တယ် ၊
ကုလားတွေက သူတို့ရွာကို ကာကွယ်ရတယ် ၊
၂ ဖက်စလုံးက သေကျေကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကုလားတွေကို တရာ့ငါးဆယ်ကျော်ကို ဖမ်းသွားတယ် ၊
လာရောက် ကျူးကျော်တဲ့ ရခိုင်တွေကို ကျတော့ မဖမ်းဘူး “
” ဂျာနယ်တွေမှာလည်း ပြောင်းပြန်တွေ ရေးသားသွားတာကို ၊
အံ့သြစွာ တွေ့ရပါတယ် “
အဲဒီ အချိန်မှာ သူရရွှေမန်း ကိုယ်တိုင်က ၂ မိနစ်အတွင်း ၊
မိန့်ခွန်းကို ရပ်ပေးပါလို့ တားယူပါတယ် ။
အမှန်တရားကို ရှာဖွေလိုသူတွေ နားထောင်သင့်တဲ့ မိန့်ခွန်းပါ ။
မိန့်ခွန်းပြောသွားတဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် ရဲ့ ၊
သတ္တိ ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ။
နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ၊
တရားဝင်ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းပါ ။
လိုရင်းကတော့ ၊ ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က ၊
အမှန်တကယ်က ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ၊
သူတို့ရဲ့ တရားဝင် လူထု ကိုယ်စားလှယ်ကတဆင့် ရှင်းပြရင်းနှင့် ၊
တရားမျှတမှု ကို တရားဝင် ပြတ်ပြတ်သားသား တောင်းဆိုနေပါပြီ ။
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး လည်း ၊
ရောက်နေတော့ ၊ အချိန်ကတော့ ကိုက်နေပါပြီ ။
အဘ ကတော့ အဖြေကို ကြိုမြင်နေပါပြီ ။
( ဒို့တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ ကြိုက်ကြိုက် မ ကြိုက်ကြိုက် ၊
လူဦးရေ ၄ သိန်း ထပ်တိုးတော့မှာ ထင်ပါတယ် )
သူကြီးရေ ၊ မသင့်တော်ဘူး ထင်ရင် ဒီ Post ကို ဖျက်လိုက်ပါ ။
ကျနော်ကတော့ သိသင့်တဲ့ သတင်း အချက်အလက် တစ်ခုလို့ ယူဆပါတယ် ။
မိုင်ပေါင်း ( ၁၅၂ ) မိုင် ရှည်လျှားသော နယ်စပ် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း ။
တခုလောက်သိချင်တာပါ။ ဦးရွှေမောင်က အဲဒီရွာမှာအရေးအခင်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူကိုယ်တိုင် အဲဒီမှာရှိနေတာလား။ဆိုတာလေးပါ။ ပြီးတော့ FR ကကော ဘာကြောင့် လူဦးရေ ၄သိန်းတိုးမဲ့ကိစ္စ ကို ထည့်ပြောနေရတာလဲ.။ဒီနိုင်ငံသားတွေလက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ယူရမှာလား။ ဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒကို ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့မဲမခွဲသင့်ဘူးလား။ သိချင်တာလေးပါ။
( တိုးတော့မှာ ထင်ပါတယ် )
အဘရေ..အဲ့ဒါလေးက အဘရဲ့ မှတ်ချက်မဟုတ်ဖူးလားဟင် ????
မထူးဆန်းပါဘူး Oo Oo , အဘက မြန်မာ နှင့်တိုင်းသားရင်းသား ပဋိပတ်ခ ဆို ရင် တိုင်းရင်းသား ဘက် က မြန်မာ တွေ ကို မုန်း လေ လေ အဘ ပျော် လေ လေ။ ခု တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘင်ဂါလီ ကျ တော့ လဲ ဘင်ဂါလီဘက်က ရှေ့နေ လိုက်နေတာ ။
ပထမ post မှာ ဘယ်သူမှအဘနောက်မပါလို့ ရှောချသွားတာ ။ အဘ ကိုငွေလှူပြရုံလေး နဲ့ မကဘဲ ရင်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မချစ်နိုင်ရင်လဲ အဆိပ်ပင်တော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး ဩဆီသားအဖြစ်နဲ့ နေပီး မြန်မာပြည်ကြီးကို မေ့လိုက်ပါ။ အဘစာတွေမှာအဘစိတ်ကို မြင်နေရပါတယ် ။ အဘမှာ မြန်မာပြည် နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အပေါ် နာကြည်း စရာတွေရှိ ခဲ့ မယ် ဆိုရင် လဲ အားလုံးကိုယ်စား မြန်မာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် နော့။ စိတ် ထဲအရှိ အတိုင်းပြောမိလို့ ရိုင်းသလို ဖြစ်သွား ရင် စာဖတ်သူတွေကို တောင်း ပန်ပါတယ်။
YUM YUM ရေ.. အဘဖေါမှာ YUM YUM ထင်သလို သဘောဆိုးတော့မရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
အမြင်မတူတဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကြောင့် အထင်မလွဲစေချင်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ Oo Oo ရေ စေတနာ အ မှား ဖြစ် မှာ ပါ လို့ သည်း ခံ ဖတ် လာခဲ့ တာ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၇ ) တောင် ရောက်လာပါ ပြီ။ စာဖတ်တာ သာ ဝါသနာပါ ပေမဲ့ စာရိုက်ရမှာ အလွန် ပျင်း တဲ့ ကျမ၊
အခုလို အရေးကြီးတဲ့ အနေအထားမှာ တော့မနေနိုင်တော့ လို့ ဝင် မန့်လိုက်မိပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့…YUM YUM ရဲ့သဘောထားကိုကျနော်နားလည်းပါတယ်..
ကျနော်လည်း အမျိုးသားရေးကိစ္စ ဖြစ်လို့သာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့
ဒါပေမယ့် မနေသာလို့ အချို့နေရာတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးမိတာတွေကတော့ရှိပါတယ်
Oo Oo နှင့် YUM YUM ရေ ။
ကိုယ့်လူမျိုးတွေဖက်က နာပြီးပြောတာပဲ ၊
မှန်တာပြောရရင် ၊ ကြိတ်ပြီးတောင် အားတက်မိသေးတာ ။
တချို့ကိစ္စတွေမှာ အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှု အကြောင်း ၊
ရေးနေသော်ငြားလည်း ၊ အဘ စိတ်ရင်းထဲမှာတော့ လိုလိုချင်ချင်ကို ၊
အဘ အဆိုဖက်ကနေ အရှုံးခံချင်နေစိတ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်ကွယ် ။
ဥပမာအားဖြင့် ၊ အခု Post လိုမျိုးပေါ့ ။
Oo Oo ရေ ။
အရမ်း ရိုးစင်း ရှင်းလင်းလွန်းတဲ့ အချက်လေးတွေပဲ ပြောမိတာပါကွယ် ။
အဓိက ကျတဲ့ ” သူ့ မိန့်ခွန်း မှန်တယ် မှားတယ် ” အဘ မပြောရပါဘူးကွယ် ။
” အမှန်တရားကို ရှာဖွေလိုသူတွေ နားထောင်သင့်တဲ့ မိန့်ခွန်းပါ ”
ဒါပေါ့ ၊ နားကို နားထောင် ရမှာပေါ့ ။
လူမှာ နားရွက် ၂ ဖက်တပ်ထားတာပဲ ၊
တဖက်ထဲက သတင်းပဲ နားထောင်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ။
သူပြောတာ အမှန်တရား လို့ ၊ အဘ မပြောဘူးလေ ။
” မိန့်ခွန်းပြောသွားတဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် ရဲ့ ၊
သတ္တိ ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ”
ဒါပေါ့ ၊ သူ့ မိန့်ခွန်းဟာ လူကြိုက်နဲ ၊ လူမုန်းများမယ် ဆိုတာ ၊
ဒီ မိန့်ခွန်း ကြောင့် သူ့နိုင်ငံရေး ဘဝ ပျက်သွားမယ် ဆိုတာ ၊
သူ သိသိကြီးနှင့် အများကြားထဲမှာ သူတစ်ယောက်ထဲ ၊
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထ ပြောရဲတဲ့ သတ္တိ ကတော့ လေးစားစရာပဲ ။
ပုံစံကတော့ ၊ သူပြင်ဆင်ပြီးပြောတာတော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး ၊
သူ့ လူမျိုး တွေကို ဝိုင်း အပြစ်တင်တာခံရလို့ ၊
မခံချင်စိတ် နှင့် လက်တမ်း ထပြောနေပုံ ရတယ် ။
ဘာပဲပြောပြော သတ္တိ ကတော့ မခေဘူး ။
” နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ၊
ဒါပေါ့ ၊ တကယ့်ကိုပဲ ၊ သမိုင်းဝင်သွားပြီလေ ။
YUM YUM ရေ ။
” ပထမ post မှာ ဘယ်သူမှအဘနောက်မပါလို့ ရှောချသွားတာ ”
ဒီ အယူအဆလေးကတော့ မှားပါတယ်ဗျာ ။
အဘ အနေ နှင့် မရေးခင်ကတည်းက ၊
Post တစ်ခုဟာ လူကြိုက်များမယ် မများဘူး ကြိုသိတာပေါ့ကွယ် ။
လူကြိုက်ပါစေတော့ ဆိုပြီး ရေးနေတာ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ် ။
( လူကြိုက် အောင်ရေးတာများ ၊ ရေးတတ်ပါ့ )
အဘ ချစ်တဲ့ အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှု နှင့် ၊
အဘ ဆင်ခြင်မိပုံ ၊ ခံစားမိပုံလေးတွေကိုပဲ ဖွင့်ချမိတာပါကွယ် ။
” အဘမှာ မြန်မာပြည် နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အပေါ်
နာကြည်း စရာတွေရှိ ခဲ့ မယ် ဆိုရင် လဲ အားလုံးကိုယ်စား
မြန်မာပြည်သူ တယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် နော့ ”
လောလောဆယ်တော့ ၊ အဘ မှာ ၊
မြန်မာပြည် နဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အပေါ် ၊
နာကြည်းစရာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူးကွယ် ။
ယုံပါ လို့ပဲ ပြောပါရစေကွယ် ။
၄ သိန်းတိုးတယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူး
တစ်ကယ်တမ်း ဖြစ်လာရင်နောက်ဆက်တွဲ စဉ်းစားစရာတွေက အများကြီးပါ
၄ သိန်းကနေ နောက်ထပ် တိုးပွားလာမှာကို ထည့်စဉ်းစားရမှာပါ
ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့..မဆီမဆိုင် ကြားထဲက ငထွားခါးနာရတဲ့အဖြစ်မို့
တကယ်တော့ ဘင်ဂါလီကိစ္စဟာ ရခိုင်ဒေသမှာအတွင်းကျိတ်ပြီး ဖြစ်နေတာကြာပါပြီ .. အခုမှသာ
ဘင်ဂါလီတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် တနိုင်ငံလုံးသိသွားရတာပါ..ဒါကြောင့် အခုချက်ချင်း ပြေလည်အောင်
ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ အဘပြောခဲ့ဖူးသလို ဘင်ဂါလီ(၁၄)သိန်းလောက်ကို အသာတကြည်နဲ့လက်ခံ
လိုက်ရင် လတ်တလောကြုံတွေ့လာရမယ့် ပြည်ပဖိအားတွေ ကနေ ရှောင်လွှဲနိုင်မှာကတော့သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအကျိုးအဆက်က နောင်တချိန်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ရှုပ်ထွေးတဲ့အကျိုးအဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်
တကယ်တော့ ဒီသန်းချီရှိနေတဲ့ ဘင်ဂါလီတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်)ကလည်း လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ခါးခါးသီးသီး
ငြင်းဆန်နေတာဟာ သူ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အား ကျနော်တို့နိုင်ငံကို လှည်းကျိုးဝင်ထမ်းခိုင်းနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ..ဒီပြသာနာကိုကျနော်တို့နိုင်ငံတခုထဲအနေ
နဲ့ဖြေရှင်းဖို့မသင့်တော်ပါဘူး..ကျနော်တို့ တနိုင်ငံထဲအနေနဲ့တော့ မဆီမဆိုင် လူမိုက်ကြီးမလုပ်သင့်ပါဘူး
အကောင်းဆုံးက ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် သြဇာကြီးတဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကို
ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) နဲ့မြန်မာ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ဘက်မှ တရားဝင် နိုင်ငံသားအဖြစ်ခွင့်ပြုသင့်သည်များကိုသာ
သေချာစီစစ်ပြီးလက်ခံနိုင်ခွင့်ရဖို့ အရေးကို ဦးတည်ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှုရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်..တစ်သန်းကျော်
ဒီလို လက်ခံသင့်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကို လက်ခံ ပြီးရင်လည်း.. နောက်ထပ် အလားတူ တရားမ၀င်ခိုးဝင်
လို့မရအောင် အသေအချာ ဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်တားဆီးမှု တွေကိုအမျိုးသားရေးသတိနဲ့ စနစ်တကျလုပ်သင့်
ပါတယ်..ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်ရင်..နောင်တချိန်မှာလည်း အလားတူကိစ္စမျိုးကို ထပ်မံကြုံတွေ့ရမှာမလွဲပါဘူး။
လက်ခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာ လူဦးရေပွါးများမှုနဲ့လွမ်းမိုးလို့မရနိုင်အောင်
အထူးသဖြင့်တော့..ဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကနေ ခြံစည်းရိုးကျော်ပြီး ပစ်လာမဲ့ အမှိုက်ထုပ်တွေ ကျနော်တို့ခြံ
” ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) ကလည်း လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ခါးခါးသီးသီး
ငြင်းဆန်နေတာဟာ သူ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်
့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အား
ကျနော်တို့နိုင်ငံကို လှည်းကျိုးဝင်ထမ်းခိုင်းနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ ”
ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) ဖက်က အပြော အရတော့ ၊
ဒီ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ စ ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ ၊
ဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် နေလာခဲ့တယ် ပြောတာပဲ ။
အဲဒါတော့ အဘ လည်း မသေချာ ၊ မသိ ဘူးလေ ။
” ကျနော် လက်တွေ့ကျကျ တွေးကြည့်မိတာပါ..အမှားပါနိုင်ပါတယ် ”
Oo Oo ပြောသွားတာ သင့်တော်ပါတယ် ။
အဘ လည်း အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးကို လိုလားမိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အဲဒီလို တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ?????
ထပ် စစ်ဆေးစရာ မလိုလောက်အောင် သေချာနေပါပြီ “
တွေ့လား ၊ ဦးမေါင်ရွှေက အပိုင်ကြီးကို ပြောသွားတာနော် ။
သူလည်း လွှတ်တော်လို နေရာမျိုးမှာ ရမ်းရွှီးနေမယ် မထင်ဘူး ၊
ပုံစံကတော့ ၊ ပြည်တွင်း ရှိပြီးသား ၉ သိန်း ရဲ့ အများစုကြီးကတော့ ၊
သေချာ စစ်ပြီးသားတွေ ဖြစ်ပုံ ရတယ် ။
ဟိုဖက်က နောက်ထပ်လာမယ့် ၄ သိန်းကိုသာ မှန် မမှန် စစ်ရလိမ့်မယ် ။
” အဲ့ဒီအကျိုးအဆက်က နောင်တချိန်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ရှုပ်ထွေးတဲ့
အကျိုးအဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်လှပါတယ် ”
စိတ် တကယ် မကောင်းပါဘူး ရွာသူား တို့ရယ် ။
ငါတို့ တိုင်းပြည် ကံ ဆိုးရှာတယ် လို့ပဲ တွေးရတော့ မလိုပါပဲ ။
အိမ်မှာ မဲများတဲ့ဘက်က နိုင်ပြီး သတင်းလာရင် မကြည့်ရတာ များလို့ပါ…
တစ်ခုသိချင်တာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က လွှတ်တော်အမတ်တွေကရော ဒီကိစ္စကို ထည့်မဆွေးနွေးကြဘူးလားဟင်…
သစ်ထူးလွင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်… မုဒိန်းမှုထပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့… တမင်တကာလုပ်နေတဲ့ ဒီကိစ္စတွေအတွက် တကယ်ကို သူခိုးလူဟစ် အလုပ်ခံရတော့မှာလား မသိတော့ပါဘူး…
ဒါနဲ့ ….အဲဒီ ဦးရွှေမောင်က ဘာ လူမျိုးလဲဗျ ။
အော်…… လပ်စသပ်တော့ လိပ်ရာဇာ ကြီးပဲ ….
နာမည်က ရခိုင်နာမည် (ဦးရွှေမောင်)
ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ် ဆိုတော့
ဒီ ရခိုင် တော်တော် ရဲ ပါလားလို့တွေးလိုက်တာ…
ရခိုင်မှ မဟုတ်ပဲ ခုနှစ်ခိုင် ဖြစ်နေတာကိုး …..ဟိုးဟိုး……
ဦးရွှေမောင် (ခ) ဦးအဒူရော်ဇက်
ဘယ်ကတည်းက အကွက်ချစီစဉ်ထားလဲမသိဘူး..လွှတ်တော်ထဲတောင် သူတို့လူကို ရအောင်ထည့်ထားတယ်… ဘယ်သူ့မဲတွေနဲ့ အမတ်ဖြစ်လာတာပါလိမ့်.. (ရခိုင်တွေ ပေးလိုက်တာများလား..)
အဟွတ် အဟွတ် .. ကျွန်တော်က ဘဖောကို သတင်းထိန်ချမ် မထားပါနဲ့ .. ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ နံမည်လေး အပြည့်အစုံ လေးရေးပေးရင် ကောင်းပါမယ် ပြောမလို့ … နောက်ကျသွားပြီကိုးးးးးးးးးးးးးးး တပ်မ ၇၇ က ဦးအောင် ထုလိုက်ပြီကိုး … :grin:
ပ ဇ တ ဆိုတော့ ပုဇွန်တောင်နော်.. ဟုတ်လားမသိ .. မြန်မာ လို ပီပီသသ ပြောတတ်ရဲ့လား လည်း နားထောင်ကြည့်ကြပါဦး….
Sorry ပါ ကို htoosan ရေ ။
ကျနော်က ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်က ဆိုလိုက်ရင်ကို ၊
ရွာသူားတွေ သိလောက်ပါတယ် ထင်မိလို့ပါ ။
ဘူးသီးတောင် မေါင်းတော မှာက ဘင်္ဂါလီ ၉၀ % နေတာလေ ။
သူတို့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ကိုယ်စားလှယ်ပဲ တက်လာမှာပေါ့ ။
” မြန်မာ လို ပီပီသသ ပြောတတ်ရဲ့လား လည်း နားထောင်ကြည့်ကြပါဦး ”
အင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ဖို့က ၊
မြန်မာစကား တတ်စရာမှ မလိုတာလေ ။
သူ့ မဲဆန္ဒနယ် ကို ကိုယ်စားပြုဖို့ပဲ လိုတာကိုး ။
” ပ ဇ တ ဆိုတော့ ပုဇွန်တောင်နော်.. ဟုတ်လားမသိ ”
ပ ဇ တ ရဲ့ ရှေ့က ( ၁၂ ) က ရန်ကုန်တိုင်း ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခုကို မြန်မာ အက္ခရာ နှင့် စဉ်ထားတာပါ ။
( ဥပမာ ကချင် ပြည်နယ် ဆိုရင် ( ၁ ) နှင့် စပါတယ် )
(၁) ဦးရွှေမောင် မှ ပြောသည် နှင့် ဦးရွှေမောင် (ခ) ဦးအဒူရော်ဇက် ကပြောသည်ဆိုတာမှာ ယုံကြည်မှု့ ဘယ်လောက်ကွာသွား နိင်သည် ဆိုတာကို ဘဖောတို့လို ပညာရှင်တွေ ကကောင်းကောင်းသိပါသည် ။
(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး မြန်မာစကား တတ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ။ မှတ်ပုံတင်က မောင်းတော မှတ်ပုံတင်ဖြစ်နေရင်လည်း ဒီစကား ကျွန်တော်မဆိုပါဘူး ။ ပုဇွန်တောင် ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ ဒီစကား ပြောတာပါ ။
ပုဇွန်တောင် ခံထားပြီး ပုဇွန်တောင်သား ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာကို ညွှန်းလိုက်တာပါ။
အင်းလေ ပုဇွန်တောင် ဆိုတာကလည်း တစ်ဝက်လောက်က ကုလားရပ်ကွက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ သူမပီလဲ ဒါကြောင့်ပါ ဆိုတဲ့ စိတ်ချမ်းသာ စရာ အယူ အဆ ဘဲ ယူလိုက်ပါ့မယ်။
ကို htoosan ရေ ။
အဘ တင်တုန်းကတော့ ဦးရွှေမောင် (ခ)
ဦးအဒူရော်ဇက် မှန်းတော့ မသိပါဘူးကွယ် ။
သူ့ မဲဆန္ဒနယ် နှင့် သူ့ ပြောပုံ ဆိုပုံအရတော့ ၊
ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး အမတ် ဖြစ်လောက်တယ်လို့တော့ ၊
မှန်းလို့ ရတာလေးပဲ ရှိတာပါကွယ် ။
အခု တပ်မ (၇၇) ပြောမှသာ သေချာ သိရတာလေ ။
ဟာ….စိန်ဗိုက်ဗိုက်ရေ နာမည်က အဒူလဒစ် ဆိုပါလား …..
ဘင်္ဂလားဒေးကကုလားတွေ ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လွန်းလို့ ကျေးရွာတွေစွန့် အိုးပစ်အိမ်ပစ်
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်က ဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဦးရွှေမောင် ဆိုတဲ့အမတ် ရဲ့ မျိုးရိုးရာဇ၀င်ကို စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ခေတ်မှီနည်းနဲ့ DNA စစ်ကြည့်လိုက်ပါ.. ရခိုင်လား ဘင်ဂါလီလားဆိုတာ အဖြေ တိတိကျကျထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဗွီဒီယိုဖိုင် ကိုကျနော်ကြည့်ပြီးပါပြီ.. သူ့ရုပ်က ရခိုင်ရုပ်မှမဟုတ်တာ..သူ့စကားသံကိုသေချာနားထောင်ကြည့်ပါ
ရခိုင်သံဝဲသလိုရှိပေမယ့် ကုလားသံ ပိုဝဲနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. ရခိုင်စကားတတ်တဲ့ကုလားတစ်ယောက်ရဲ့
စကားပြောသံ နားထောင်ဖူးသူတိုင်း သိကြပါလိမ့်မယ်။
သူပြောဆိုသွားတာတွေက ဘင်ဂါလီဖက်ကနေ တစ်ဖက်သတ် ပြောဆိုသွားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်..လက်တွေ့မကျတာတွေ
ရခိုင်အစစ်နဲ့ ကုလားအစစ်ကို မြင်ဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ..သူပြောသလို ရခိုင်နဲ့ကုလား ရုပ်ရည်အသွင်အပြင် ဘယ်နေရာမှာ
သွားတူနေလို့လဲ…စကားကရော..ရခိုင်စကားနဲ့ ကုလားစကား တူနေလို့လား .. စာပေ ကိုရော တူတယ်လို့ပြောချင်အုံးမလား..
ကူလီကူမာနဲ့ အတင့်ရဲလွန်းပါတကား… ဒွတ်ခ..ဒွတ်ခ
ရိုဟင်ဂျာလက်တံတွေ ဘယ်လောက်များပြီး ဘယ်လောက်ရှည်နေပြီလဲ… လွတ်တော်ထဲအထိထိုးဖေါက်ထားပြီလား…
” ဗွီဒီယိုဖိုင် ကိုကျနော်ကြည့်ပြီးပါပြီ.. သူ့ရုပ်က ရခိုင်ရုပ်မှမဟုတ်တာ..
အမ်မာလေးဗျာ ၊ အမ်မာလေးဗျာ ၊
မြန်မာပြည်က Connection နှင့် ၊
အဲဒီ You Tube VDO မိနစ် ၂၀ စာ ကြီးကို ကြည့်ဖို့ မလွယ်လှဘူးထင်လို့ ၊
အဘ မှာဖြင့် အဲဒီ VDO ကြီးကို ၅ ခေါက်လောက် ၊
နားထောင်လိုက် ရေးလိုက် လုပ်လိုက်ရတာ ဇက်ကြောကို တက်ရော ။
အဲလို မြန်မာပြည်ကနေ လွယ်လွယ် ကြည့်လို့ ရနေမှန်းသိရင် ၊
Link Address လေးပဲ ပေးလိုက်တာပေါ့ ။
အခုတော့ ။ အဟင့် ၊
လူမုန်းလဲ ခံရသေး ၊ ဇက်ကြောလဲ တက်သေး ။
အဘအပင်ပန်းခံပြီး ရေးပေးတာ အလကားမဖြစ်ပါဘူးဗျာ..မြန်မာပြည်ကွန်နရှင်နဲ့လည်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်
(ခ) ဦးအဒူရော်ဇက် ဟာ ရခိုင်မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဘင်္ဂလီစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ် ၊ ချီးထုပ်
ကြံ့ဖွတ်တွေက မဲအောင်နိုင်ချင်ဇောနဲ့ ကုလားများတဲ့နေရာမှာ မဲရလိုမှုနဲ့ အမတ်ဖြစ်သွား
တယ်လို့ သိရတယ် ၊
ဒီလိုမိန့်ခွန်းပြောရဲတဲ့ ဘင်္ဂလီအမတ် အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားခံရတော့မှာပါ ။
ဦးအဒူရော်ဇက် တို့များကွယ် .. အခွင့်အရေးတန်းတူ ပေးးမိတာနဲ့
သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအကျိုးအတွက် .. အူယားဖါးယားကိုလုပ်တော့တာပဲ
ဒီကောင်တွေ အတွင်းစည်းအထိဝင်လာနိုင်တာ ငကြံ့ဖွတ် တရားခံ ၊
ဘင်္ဂလီလိပ်မျိုးက ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်တော့တာဘဲ ၊ ခုတော့ ကောင်းပီပေါ့ ၊
ဒါက အစဘဲရှိသေးတာ ၊ နောင်ဆိုရင် ငယ်ထိပ်ပေါ်တက်ပီး သေးပေါက်မှာ ။
တတိယနိုင်ငံမှာ သွားနေကြတာပေါ့ ခွီးးးး
Dear Oo Oo,
I realized you meant to be funny but are we going to forget how our old generations sacrificed for us to beacountry like this??
ဂွဒ်တယ်ဗျာ။ ဥဥရဲ့ စိတ်ကူးက။
ဒီ comment ကိုဖတ်ပြီး ဟိုတလောက ကျမစိတ်ကူုးထဲမှာ မြန်မာပြည်မြေပုံဆွဲကြည့်မိတာကိုသတိရမိသေးတယ်.. မလှတော့ဘူးရှင်..ပိန်လိမ်ပြီး ဘာပုံထွက်နေမှန်းမသိဘူး…
ဘိုး ဘေ စဉ်ဆက်နေတိုင်းသာ
ငဇင်ကာနဲ့ သူ့အမျိုးတွေကို မှတ်ပုံတင်
ဘင်္ဂလီအမတ်က လွှတ်တော်ထဲရောက်နေတာကတော့ လုံးဝ(လုံးဝ)မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။
မဲနိုင်ချင်ဇောနဲ့ နိုင်ငံကို သစ္စာဖောက်ပြီးရောင်းစားနှိုင်သော စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်များကိုလဲ အံ့သြမဆုံးပါဘူး။
အဲဒီ အဒူရော်ဇက် ဆိုတဲ့ ခွေးကုလားဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိမနေသင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော့ အထင် ဒီကောင်ပြုတ်ဖို့တော့ တော်တော်နီးစပ်နေလောက်ပါပြီ။
တစ်နိုင်ငံလုံးက လက်မခံတာကို လက်ခံအောင်သောက်ရှက်မရှိ အတင့်ရဲသကိုး။
win khine says:
u shwe maung was graduated from YIT 1994, B.E ( mechanical).in 1988 uprising,he was student union leader in Buthi daung,he was in fourth year.his father was police officer in Kyauk Taw town ship, U Har Di.after graduated he worked in UNHCR in northern Rakhine state.He knew very well about this situation,Muslims in Rakhine state are live in so many years like6or7generations,Normally they can get citizenship, according to basic human right.Rakhines, mro, dinet, maranmar gyi, chakma who live in bangladesh and India are get citizenship of their country,can get special chance from Bangladesh government.bangladesh ambassador to myanmar is chakma tribe,is very clear about Bangladesh government decision about minority.when i was in twelve year old i visited to rakhine state because my father work in sittwe hospital and i saw Rakhine buddhist discrimanated to muslim peoples,likeaanimal,my father want to settle in sittwe but i refuse to settle in this discrimnated people, like they use to treated to muslim in south africa aperthied,not rules of law in Ralkhine state, mostly rakhine budhist men are drinking too much.i was in sittwe i was swimming in kispa nadi river, rakhine young man asked me who are u, i answered i am from Taungoo and speak to them burmese language and thay said, here is Rakhine state do not speak burmese language,call me (auck shee) it means they delivever waste to river mostly burmese live in down of the river,so the waste in reach to burmese peoples.Rakhine also discriminated even in burmese ordinary people.i travel all over the country ,i was never treated other minorities to burmese people, now they are protesting in UN head quarter in New York to get independent Rakhine nation.Muslims in rakhine state demanding to get citizenship, not independent nation.but chinese are occupied the whole mandalay city and shan state and kachin state, beware of burmese people and they are just new comer to get citizenship but nobody in hluttaw compainted about chinese invasion in burma.north rakhine state muslims they used official lan guage is burmese language and burmese kyats but in wa state mostly wa are used chinese language and chinese yuan.
ကိုဝင်းခိုင် ပြောပြတာကတော့ ၊
ဦးရွှေမောင် က YIT က ၁၉၉၄ ခုနှစ် မှာ ၊
BE ( Mechanical ) နှင့် ပြီးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာပါတဲ့ ။
၈၈ တုန်းက ဘူးသီးတောင် က ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်ပါတဲ့ ။
UNHCR မှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။
အသက် သိပ်မကြီးသေးဘူးထင်တယ် ။
ကျန်တာတော့ အဘ ဘာသာဆက်မပြန်ရဲတော့ဘူး ။
ကိုဝင်းခိုင် ရေးထားတာ အားလုံးကိုသာ
ဘာသာပြန် လိုက်လို့ကတော့ ။ ဟီဟိ ။
အဘ တောင် ကြောက်ကြောက် ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သာ ဖတ်ကြည့်ကြတော့ ။
တော်တော် ကို အတွေးတွေ ပေးတာဘဲနော် .. :grin:
(၁) ၁၉၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က YIT မှာ ကျောင်းဆက်တက်ပြီး ဘွဲ့ရခဲ့တယ် ……. အင်း အင်း အမြင်မှန် ပြန်ရသွားလို့လား … သူလျှို အဖြစ်ထည့်ထားလို့လား …
(၂) ၁၉၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က ကြံ့ ဖွတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ် …. အင်း အင်း အမြင်မှန် ပြန်ရသွားလို့ လား.. ဒို့လူကြီးများ ခွင့်လွှတ်တတ်လို့လား …
တော်ပြီ .. ဆက်မတွေးတော့ဘူး .. ဂီဂီ့ အိမ်စာတွေ သွားလုပ်တာကမှ မျက်စိအေး စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းသေးတယ် …. ဘိုင့် ဘိုင် ..ဘိုင် .. :grin:
Yes, that kalar is in parliment due to Aung Thein Lin… Aung Thein Lin has the main responsibility of this matter. Both2kalars at Parliment are responsibility of Aung Thein Lin.
ဘာကြောင့် ပြောနိုင်တာလဲကွယ် ။
ကျနော် နားမရှင်းလို့ပါ ။
The whole Maungdaw people knew Aung Thein Lin promised those kalar to let them build mosques as well as they would be granted NRC if they vote for USDP…
There were some muslims parties registered for election but why those kalars would vote only USDP instead of their brotherhood parties ???…
Aba For, I have been saying this in my comments, those certain people from USDP would not mind to sell Myanmar to anyone for their own good. It’s very very disgusting.
ဒေပိုင် ကိစ္စတိကို ငြိမ်ခံနီလို့ မဖြစ်ပါဒေ ၊ ငရို့တိမှာ တာဝန်ဟိန့်ရေ ။
ဆရာ ဒုတ်ထိုး ရေ ။
အခု အချိန်ဟာ တိုက်ခိုက်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး ထင်ပါတယ် ။
သင်္ခန်းစာ ယူပြီး ၊ ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေကို ၊
တည်ဆောက်ရမယ့် အချိန် လို့ထင်ပါတယ် ။
တိုက်ခိုက်ဖို့ စွာ မဟုတ်ပါရှန့်
တာဝန် ဟိန့်ရေ အကြောင်း အဂေါင့်ပြောကတ်စွာပါ
Win Khine isaBangali & he is making Bull-shit stories about U Shwe maung.
He is planning to putawedge between Bamar & Rakhine.
နောက်ဆုံးရ သတင်းလေး ထပ်တင်ပေးပါတယ် ။
ဟုတ်မဟုတ် မသေချာသေးပါ ။
ပုံလေးပါ ၊ ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
” မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ကို ခြံစည်းရိုးကာရံသည့်
ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားပြီး မကြာမီမှာပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုံ/ကာ
သမ္မတ၏ အမိန့် ဖြင့်
အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ နယ်စပ်ရေးရာနှင့် မြန်မာစက်မှု့ လက်မှု့ 
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးနှင့် လူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးနှင့်
ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီတို့ မှ
” တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်ပါ… အိန္ဒိယ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်က
ခြံစည်းရိုးလိုပါဘဲ… လုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ… ” ဟု
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ မှ ပြောကြားသည်။
ဖြစ်ကြောင်နှင့် ခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်လာသူများကို ပြင်းထန်သော
အရေးယူမှု့ များ၊ ပစ်ခတ်မှု့ များပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် “
ကျုပ်အမြင်ကိုရေးရင် နှစ်ဖက်လုံးက ၀ိုင်းဆဲမှာမို့ ပိုစ့်ရုပ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ချိန်ဆနေတာ..။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံသားဘင်္ဂါလီဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားပါ။ ပြန်ဖျက်လို့မရပါဘူ….။
(၂)အဲဒီ ဘင်္ဂါလီအမတ်ပြောသွားတာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး လိမ်ပြောတာဖြစ်တယ်။
ကိုင်း….. နှစ်ဖက်လုံးက ၀ိုင်းဆဲကြပေတော့ …..
အရမ်းတော်တဲ့ ဦးဦးပါလေရာ ကို ၊
Best Comment ပေးလိုက်ပြီ ။
သိချင်လို့ ၊ ရန်ကုန်ကနေ ၊
ကျနော်ပေးတဲ့ You Tube VDO Link ကို ကြည့်လို့ရလား ။
ဒါဆိုရင်တော့ ကျနော် အပင်ပန်းခံ ဇက်ကြောတက်ခံပြီး ၊
ရိုက်တင်ပေးခဲ့တာ အကျိုး မမဲ့ဘူးပေါ့ ။
မူရင်း VDO ကို ကြည့်စေချင်လိုက်တာ ။
Please also confirm (if you can) that the wall is made of steel and bar wires and not made of bamboo and wood….
Wall မဟုတ်ရပါကွယ် ၊ Fence လေးရယ်ပါ ။
Steel လည်း ဟုတ်ပုံမရပါဘူး ၊ Wood ထင်ပါတယ် ။
Bamboo မဖြစ်တာပဲ ကံကောင်း ။
Blade Wire မတတ်နိုင်လို့ ၊ Barbed Wire ပဲတပ်ထားပုံပဲ ။
ဟိုဘက်က စောင်ထူထူခင်းပြီး ဝင်လာရင် အေးဆေးပဲ ။
မိုင်းထောင်ထားမလားတော့ မသိဘူး ။
တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှ ၊ ဘာတွေ လာမေးနေသတုန်း ။
ကြားထားတဲ့ သတင်းတွေအရ ဆိုရင် ၊ တချို့ဆောက်ပြီးသား နေရာတွေမှာ ၊
ဟိုဘက်က သံဆူးကြိုးတွေကို လာဖြတ်ပြီး ရောင်းစားကြတယ်ပြောတယ် ။
ဓါတ်ပုံထဲက ခြံစည်းရိုးကတော့ ကုလားတွေ ဖြုတ်ရောင်းစားဘို့ ရိက္ခာဆက်ပေးထားသလိုပဲ ….
ခြံစည်းရိုးကိုလဲ စောင့်နိုင်ရမယ် ..
၀င်ဖျက်စီးရင်လဲ အရင်တုန်းကလို မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေပဲ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဘာအ၀တ်အစားဝတ်ထားသည်ဖြစ်စေ ပစ် ရဲရမယ်..။
အခုပြသနာမဖြစ်ခင်ကတည်းက ခြံစည်းရိုးတွေ ဖြုတ်ရောင်းခံရကြောင်း
ဖတ်ခဲ့မိပါတယ်။ ကိုယ်အိမ်ကခြံစည်းရိုးကို သူများလာဖြုတ်ရင်ကြိုက်ကြမှာ
မဟုတ်ဘူး။ မိမိနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုကို ကာကွယ်တဲ့ ခြံစည်းရိုးကို လာဖြုတ်တာ
မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကြည့်နေတာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်တစ်ဆင့်ခိုင်းတာ
လားလို့ တွေးမိတယ်။ (ငွေသာလျှင်ပဓာနပေါ့လေ)
လူမျိုးရေး အဘယ်မည်သော ဘာသာရေး – ဘယ်ခွဲခြားရေးပေတံတွေနဲ့ မှတိုင်းစရာမရှိပါ။ကျွန်တော်
ဘိုးဘေးတွေ အသက်သွေးချွေးရင်းပြီး အမွေပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကို –
သန့် ရှင်းအောင် ကျစ်လစ်ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပြီးအမွေပေးခဲ့ကြဖို့ ကို …. တင်ပြခြင်းပါပဲ။
ပြားနေပြီး – နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေဟာ ဒေါင်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်
သည်ဖြင့် – သည်နေရာမှာ ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက ဘာပြီးမှဘာလုပ်ရမယ် ဘယ်ဟာကပိုပြီးအ
ပဲ။ အားလုံးဟာ သေရေးရှင်ရေးလိုတပြိုင်တည်းမှာ အရေးကြီးနေတယ် – အဲသည်လိုလစ်လျှူရှူခဲ့တာ
နဲ့ အလားတူနေမယ် … နှစ်ခုစလုံးတပြိုင်နက်လုပ်ရမယ် … ဘယ်ဟာအရင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘာမှ
ကုလားအရေး ဓါးသွေးစရာမလိုသေးဘူးလို့ အချို့ ကစောဒကတက်ကြတယ် – ဖြစ်လာမှဓါးသွေးရင်
တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ့်မှာတာဝန်ရှိတယ် အားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တပြိုင်နက်သတိ အထပ်ထပ်ချပြီးလုပ်ကြရမယ်လို့ သာမှတ်ထားပါ။ အခုကျွန်တော်သည် message ကိုရေးနေတဲ့
တပ်မ ဂဏန်းကြီး ကယ်လို့ ပေါ့ကွာ.ညှင်း.ညှင်း..
အဒူLဒစ်တွေ သံဆူးကြိုးဖြတ်ရောင်း၊ မြန်မာပြည်ထဲခိုးဝင်၊ ဘေဘီတွေမွေးပြီးမျိုးစေ့ချ၊ အဒူLဒစ်နိုင်ငံဂျဖစ်တွားမှ အဘားအဘား မလုပ်နဲ့ 
ကြတ်ဖွတ်က အဒူLဒစ်တစ်နေယောက်နဲ့ တောင် ရွာလည်နေတာကို
စိန်ဗိုက်ဗိုက် ရေ ။
သိတယ် ။ စိုးရိမ်တာတောင် မဟုတ်ဘူး ၊ ကြောက်တယ် ။
လိုချင်တာက ၊ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြော ။
မတရားတဲ့ ၊ အကြမ်းဖက်မယ့် ၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းတော့ မပြောနှင့်လေ ။
လူဆန်ဆန် နှင့် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြော ။
လူဆန်ဆန် နှင့် ဖြစ်နိုင်တာ တစ်နည်းပဲရှိတယ် ။
သူရဲကောင်း အနစ်နာခံမယ့်လူတွေ အများကြီး လိုတယ် ။
၁ ။ နယ်ခြားရွာမှာ သွားဇါတ်မြုပ်နေပေးရမယ် ။
၂ ။ အသက် အန္တရာယ် ရှိမယ် ၊ ပင်ပန်း ဆင်းရဲမယ် ။
၃ ။ ကလေးတွေ အများကြီး မွေးရမယ် ။
၄ ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် Next Generation ကလေးတွေ
အစစ အရာရာ နိမ့်ကျသွားမယ် ။
လိုအပ်မယ့် ငွေကြေး အရင်းအနှီး ကို အဘ တို့လို ပြည်သူတွေက ထောက်ရမယ် ။
လိုအပ်မယ့် လုံခြုံရေးကို အစိုးရက တာဝန်ယူရမယ် ။
မလုံလောက်ရင် နယ်ခြားစောင့် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ရမယ် ။
အဓိက ရှေ့ဆုံးက အနစ်နာခံ သင့်တာ ရခိုင်တွေပဲ ။
ရခိုင်တွေ အားလုံး နိုင်ငံခြားကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြန်လာသင့်ပြီ ။
သူတို့ ကတော့ မတရားတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးတယ် ၊ အကြမ်းဖက်တယ် ၊ မုဒိန်းကျင့် ၊ အိုးအိမ်တိုက်တာ အဆောက်အအုံတွေကို မီးရှို့ တယ် ။ ပီးတော့ မီဒီယာတွေ သုံးပြီး ပြောင်းပြန်လိမ် ၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေပေး ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ တွေကချိန်းခြောက် ။
ကျွန်တော်တို့ က လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ၊ စာနာမှုတွေ ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့ ။
ဦးဖော ဆိုသူ(F.R)ကြီးရေ….ဘင်္ဂါလီတွေ(၄)သိန်းလောက် မြန်မာနိုင်ငံသားပေးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ခင်များကြီး သိရဲ့လား …စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားကြီး ထမင်းစားပီးကြီးလာတာမဟုတ်တော့ မစဉ်းစားတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ၊
ဘင်္ဂါလီယောက်ကျားတစ်ယောက်၊မိန်းမလေးယောက် ခလေး အယောက်(၂၀)မွေးတယ်၊ အဲဒီ ခင်ဗျားကြီးပြောတဲ့ (၄)သိန်းထဲမှာ ယောက်ကျားတစ်သိန်းပဲပါတယ်ထား၊ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ…
ခင်ဗျားကြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ ရေးပြီးအခုမှ အဖျားမရူးနဲ့…
ခင်ဗျားတို့လို ဘေးတီးသမားတွေ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ ဝေးဝေးမှာနေရင်ကောင်းမယ်…
ရိုဟင်ဂျာဘက်ကဒီလောက် အာမခံပေးနေတာ အကြံအစည်တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်..ဟိဟိ..
အရေးကြီးလိုဲ့၁၂၅မိုင်ဘဲ ရှိတာမို့အိန္ဒိယလိုအပြည့်ကာပြီးကျုးကျော်ဝင်လာရင် အိန္ဒိယလို အရေးယူရဲပမလား၊
မဟုတ်ရင် ကျွေးမွေးရတာ ဘဏ္ဏာငွေ အလကား အပိုကုန်တယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ အဒူလဒစ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်။ သူ့လိုလူမျိုးတွေရှိပါသေးသည်။
သူတို့ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေက အခုမှ အကောင်အထည်စပေါ်နေတာ… အနှစ်နှစ်အလလက သူလျှိုတွေသွင်း.. NGO တွေထဲ သူတို့လူတွေလွှတ်…မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မျိုးဆက်တွေဖြန့်… ဘယ်အချိန်လောက်ကတည်းက အကွက်ချထားသလဲမသိဘဲနဲ့ အခုမှ စစ်ဆင်ရေးလည်းစရော တို့တွေအကုန် ပျားတုပ်နေရပြီ… သူတို့လက်တံရှည်တွေက ဘယ်အထိသိမ်းပိုက်ထားပြီလဲ… ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တတိတိနဲ့အကွက်တွေရွှေ့ခဲ့တာ အခုမှပွဲစတုန်းရှိသေး.. 21 ရာစုဆိုတာ ဘာသာလွှမ်းမိုးမမိုးတော့ မသိဘူး.. ရိုဟင်ဂျာကတော့ ရခိုင်ကိုလွှမ်းမိုးတော့မယ်…
ရိုဟင်ဂျာကိုသာ မဲနေတုန်း… ဟိုဘက်က ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တွေနဲ့လည်း တကယ့်ကိုဆွေမျိုးတော်ပြီး နိုင်ငံကမြေတွေပါ လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ ရွှေလမ်းခင်းပေးရတော့မယ်…
ဟင်း.. အလင်းရောင်လေး မြင်မယ်ကြံလိုက်…တိမ်မည်းတွေဖုံးလိုက်နဲ့…. …